2 Ụzọ Tether iPad ka iPhone 3G Networks
> Resource> iPhone> 2 Ụzọ Tether iPad ka iPhone 3G Networks
Bụrụ na ị nwere otutu data atụmatụ (ọtụtụ smartphones-akparaghị ókè otu) n'ihi na gị iPhone, ma ọ bụ ị nanị achọghị iji kwụọ ụgwọ maka abụọ dị iche iche data atụmatụ, gbakwunyere, ị nwere ike otutu ngwaọrụ ka ịnweta internet. Gịnị bụ ihe ngwọta ya? I nwere ike tether gị iPad ka iPhone 3G netwọk, na kwa ngwaọrụ ndị ọzọ. Ihe ị chọrọ bụ naanị a jailbreak iPhone na otu onye nke iPhone tethering ngwa ẹkenam n'okpuru.
Tethering iPad ka iPhone na Pdanet (free)
Pdanet bụ otu n'ime 2 kasị mma tethering software utu aha na-eme gị iPhone nke ọ bụla version n'ime a WiFi hotspot mere na ị nwere ike jikọọ internet na kọmputa gị ma ọ bụ iPads. Ọ na-ekwe gị iPad na-aga online-ejighi eriri site na 2G / 3G / 4G netwọk na iPhone. E wezụga WiFi tethering, i nwere ike jiri eriri USB tether iPad ka iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, na mbụ ọgbọ nke iPhone.
Easy iji Tether gị iPad ka iPhone
1.Jailbroken gị iPhone.
2.Update Cydia na jailbroken iPhone.
3.Search maka Pdanet na Wụnye.
4.Make ntọala Pdanet na-amalite tethering iPad.
Biko ego gị nkwekọrịta / ụgbọelu nkwekọrịta banyere ọzọ iPad tethering. Extra ebubo nwere ike ide.
Tethering iPad ka iPhone na MyWi ($ 9.99 otu oge free)
Ị nwekwara mkpa jailbreak gị iPhone n'ihu na-eji MyWi. MyWi yiri Pdanet, ma mfe iji na-efu gị na $9.99 USD. Otú ọ dị, tụnyere gị ọzọ data atụmatụ, ọ bụ ka a ọnụ ala ngwọta ka gị iPad jikọọ internet effortlessly. N'okpuru ebe a bụ YouTube video nkuzi tether iPad ka iPhone. Lelee ya.
Mụta ihe banyere MyWi >>
Olee otú Hichapụ oyiri Photos / Foto dị na iPhone / iPad / iPad Obere